Creative Writing » လက်ဘက်ရည်ဆိုင်နှင့် ကျနော်	15
kai says: ကုလားတွေဆီကယူလိုက်တဲ့ ဗမာတွေရဲ့ ရိုးသွားတဲ့အရာ…ဖြစ်သွားသော ရိုးရာပေါ့…။
kotun winlatt says: မြန်မာပြည်က လက်ဘက်ရည် ရာဇဝင် တစ်ချို့တစ်ဝက် ကျနော်ပြန်ပီးဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာပါသဗျ . .
ဦးဦးပါလေရာ says: ကြားဖူးသလောက်တော့……
kotun winlatt says: ဦးဦးပါ ရေးပြသွားတာတွေက မှတ်သားစရာတွေပါပဲ ငယ်ငယ်က ဒန်ချိုင့်လေးဆွဲပြီး လက်ဘက်ရည် ဝယ်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝ အခုကျတော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ လုပ်ငန်းအကြောင်း ထွေရာလေးပါးပြောနေရတဲ့ ဘဝ
kai says: အဟမ်း.. ပြောသာပြောတာ…
kotun winlatt says: အယ် . . . သူကြီးမင်းလည်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရတာကို သဘောကျတဲ့ လူပါလား . . .
တောတွင်းပျော် says: ကျနော်ကတော့တစ်မျိုး
kotun winlatt says: ဟေ …. ကတောပျော် …. အကြိုက်ကလည်း များပါ့…
Swal Taw Ywet says: အပိုဆာဒါး ဆိုတဲ့ မြန်မာအသုံးလေးလည်း အဲကလာတာဘဲ ဖြစ်လိမ့်မဗျ။
kai says: တန်ဖိုးရှိသဗျ…
ကျုပ်က.. အပိုစာသားကို.. ရွှတ်ပြီးခေါ်နေတယ်မှတ်တာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: အင်းဗျ…. ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ …
ခင်ဇော် says: ဒါ က ကျနော့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လွမ်းချင်းး
ဦးကြောင်ကြီး says: လဖက်ရည်ဆိုင် ဆိုတာ အချိန်ဖြုန်းတီးရာ နေလျှာတခုဘာဂျာ…။ ၉၀% မှန်သယ်ဆို အဘူငြင်းမရဲ
kai says: အင်း… ကျုပ်အတွက်တော့… …အရေးကြီးတဲ့အတွေးအခေါ်တချို့ မွေးဖွားပေးခဲ့ရာနေရာတွေလည်းဖြစ်လို့..နေရဲ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Thint Aye Yeik says: လက်ဖက်ရည် ကျဆိမ့်ဆိုတာက ကျနော့် အချစ်ဦး။